Madasha qaran oo ay ku mideysan yihiin xubnaha mucaaradka, guddoomiyaha aqalka sare, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo farriin la xiriirta xaalada dalka u dirtay golaha amaanka Beesha caalamka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madasha qaran oo ay ku mideysan yihiin xubnaha mucaaradka, guddoomiyaha aqalka sare,...
Madasha qaran oo ay ku mideysan yihiin xubnaha mucaaradka, guddoomiyaha aqalka sare, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo farriin la xiriirta xaalada dalka u dirtay golaha amaanka Beesha caalamka.
Madasha la magac-baxday bad-baado qaran oo ay ku mideysan yihiin xubnaha mucaaradka, guddoomiyaha aqalka sare, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa frriin la xiriirta xaalada dalka u dirtay golaha amaanka ee QM.
Qoraalka ay madasha la wadaagtay golaha ammaanka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay xaaladda cakiran ee Soomaaliya, gaar ahaan arrinta muddo kororsiga.
Madasha bad-baado qaran ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay si weyn uga soo horjeedo go’aanka Golaha Shacabka uu ku ansixiyey qaraarkaasi labada sano ah.
“Go’aanka ka soo baxay Aqalka Hoose ee Baarlamaanka ee ay ku kororsadeen shaqadooda iyo tan madaxweynaha laba sano waa waxba kama jiraan” ayaa lagu yiri warqadda.
Sidoo kale madasha bad-baado qaran ayaa Qaramada Midoobay ka dalbaday in fariintooda laga aqriyo golaha hortooda.
Waxa kale oo ay intaasi kusii dareen in tallaabada ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ay khatar ku tahay xasilloonida, nabadda iyo midnimada Soomaaliya.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo Soomaaliya ay xaalad cusub gashay, kadib muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo fashilka ku yimid wada-hadalladii doorashada.
Previous articleQarax lagu dilay Guddoomiye ku xigeenka amniga degmada Dayniile oo ka dhacay Muqdisho.
Next articleDagaal ka dhashay Dhul Beereed laga iibiyay Xawaalada Kaah oo ka dhacay Kismaayo.
Baarlamanka Puntland oo magacaabaya saakay guddi ka kooban 9...
Gudomiyaha Degmada Mandheera oo wacad ku maray inay ka hor tagayaan...
Xoghayaha Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin ayaa sheegay in xiriirka Mareykanka iyo...
Sam sam oo ka hadashay Qayaamadii Jaceelka uu ku...